‘प्रेमगीत - ३’मा राजेश हमालको इन्ट्री, के भुमिकामा देखिदैछन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ‘प्रेमगीत - ३’मा राजेश हमालको इन्ट्री, के भुमिकामा देखिदैछन् ?
‘प्रेमगीत – ३’मा राजेश हमालको इन्ट्री, के भुमिकामा देखिदैछन् ?
फागुन २३ गते, २०७५ - १२:०१
काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल प्रेम गीत ३ मा देखिने खबर बाहिर आएको छ । सन्तोष सेनले निर्माण गर्ने फिल्म ‘प्रेमगीत’ को तेस्रो सिरिजमा हमाल पिताको भूमिकामा फाइनल भएको गोप्य स्रोतले बताएको छ । फिल्ममा उनी अभिनेता प्रदीप खड्काको पिताको भूमिकामा देखिनेछन् । महानायक हमालले यसअघि थुप्रै फिल्ममा पिता र दाईको भूमिका निभाइसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, पिताको भूमिका भए पनि रोल पावरफुल भएका कारण राजेश हमालले फिल्म साइन गरेका हुन् । हमाल फिल्ममा अनुबन्ध भएको कुरा भने निर्माता सेनले बताउन चाहेनन् ।
केही दिन अगाडि मात्र अभिनेता हमाल र निर्माता सेनबीच कागजी सम्झौता भइसकेको गोप्य स्रोत बताउँछ । ‘प्रेमगीत’को पहिलो पार्टलाई निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेका थिए भने दोस्रो पार्टका निर्देशक रामशरण पाठक हुन् । अब तेस्रो पार्टलाई ‘डमरुको डण्डीवियो’ फेम्ड निर्देशक छेतन गुरुङले निर्देशन गर्दैछन् ।
फागुन २३ गते, २०७५ - १२:०१ मा प्रकाशित